Ahoana ny fomba hanafenana rakitra amin'ny Linux (mihoatra ny fampiasana ny vanim-potoana amin'ny anarana) | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fomba hanafenana rakitra amin'ny Linux (mihoatra ny fampiasana ny vanim-potoana amin'ny anarana)
Amin'ny tenako lahatsoratra teo aloha momba ny fomba fanodikodinana kaody Bash Percaff_TI99 Nangataka ahy izy mba hanao lahatsoratra iray hafa saingy miresaka momba ny fanafenana rakitra iray ao anaty iray hafa, indrindra ny fanafenana rakitra ao anaty sary iray:
Mpampiasa Windows izahay indray mandeha ary nanandrana nanafina zavatra izay tsy tianay olon-kafa fotsiny ny fotoana sasany. Noho izany dia mampiasa rindrambaiko marobe isika, ny sasany toa ny HideFoldersXP, LockFolder, sns ...
Ankehitriny rehefa mampiasa Linux isika dia te hanao toy izany koa, indrisy ny manafina toy izany dia tsy hoe be ny rindranasa. Na ny fahazoan-dàlana mifanaraka amin'izany dia azo ampiharina handrarana ny hafa tsy hiditra amin'ny fampirimana iray, na hanafina izay tiantsika harovana, ny zavatra iray hafa fantatra dia hoe: «omeo anarana ny folder na fisie ary asio fe-potoana (.) eo am-piandohana, hanafina azy io«. Fa izany no mitovy amin'ny Windows «tsindrio havanana amin'ny fampirimana, zahao ny safidin'ny folder miafina“… Tsy izany no tena tadiavinay.
Eto izy ireo dia hianatra ny fomba hanafenana rakitra iray na maromaro ao amin'ny GNU / Linux, nefa tsy mila mametraka programa sarotra (tsy misy tena izy), raha tsy mila manafina na inona na inona sns.
Ny valiny dia, sary tsy mampidi-doza izay hisy ao anatiny, fisie RAR misy teny miafina (na fisie rakitra voafintina fotsiny, tar.gz sns). Ny fikafika dia ny rehefa tsindrio indroa amin'ny sary tsy mampidi-doza isika dia haseho azy tsara izany, fa mba hahitana ny atiny miafina ao anatiny, dia tsy maintsy sokafintsika miaraka amin'ny mpitantana ny rakitra (File-Roller, Ark, io sary tsy mampidi-doza io. sns.), ampidiro ny teny miafina napetrantsika amin'ny fisie RAR, ary izany no ahitantsika ny atiny. Mety ho sarotra be izany, saingy baiko roa no resahina, eto dia mihoatra ny nohazavaina ary miaraka amin'ny antsipiriany sy sary lehibe ...
Andao hatao hoe te hanafina sary isika, andao lazaina izao:
1. Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny famoronana fampirimana, hiantsoantsika azy isika «Tsiambaratelo«. Ao anatin'io fampirimana io no hametrahantsika an'io sary io, ary koa ireo rakitra hafa rehetra tianay hanafina. Amin'ity ohatra ity dia tsy hanafina afa-tsy io sary io isika, saingy mety ho rakitra (sary, antontan-taratasy sns) araka izay tadiavintsika.
2. Ankehitriny isika mampitsahatra an'io fampirimana io (zava-miafina) miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Ny dikan'io tsipika io dia toy izao:
rar - »Potserina amin'ny endrika RAR
a - »Manampy na manampy
secret.rar - »Anaran'ny fisie .RAR izay ho azontsika vokatr'izany
-hp - »Manondro fa ity rakitra .RAR ity dia hanana teny miafina na teny miafina
Rehefa apetratsika io baiko io dia hangataka amintsika tenimiafina ho an'ny fisie RAR (miafina.rar), apetrakay indroa izy io ary hamorona ilay rakitra voafintina miaraka amin'ny teny miafina, asehoko anao ny pikantsary hanazavana ny fisalasalana:
3. Vonona, efa manana ny fisie izahay miafina.rar arovan'ny tenimiafiko, izao isika dia tsy maintsy mitady sary tsy mampidi-doza izay tsy mampiahiahy, toa izao:
4. Ankehitriny dia hapetrakay tsotra izao ilay rakitra miafina.rar anaty sary (NoelyTux2008.png) miaraka amina baiko, toy izao:
cat ChristmasTux2008.png secret.rar > foto_lista.png
5. Inona no hataony dia ny mamorona sary vaovao (sary_list.png) fa raha nosokafany, dia aseho tsara ny sary, fa raha manova ny fanitarana izy ireo (sary_list.png a photo_list.rar) hangataka aminay ny tenimiafina napetrakay (Napetrako avy amin'ny linux ny tenimiafina) ary hitantsika ny sarin'ilay zazavavy.
Ity ny sary_list.png ny ahy hijery ny fomba fiasan'ny zava-drehetra:
Ary tsara, tsy misy zavatra betsaka azo ampiana momba ny fomba hanafenana 😀
Averiko ihany, raha te-hahita ny atiny miafina ao anaty sary ianao dia ovao fotsiny ny fanitarana ny sary (avy amin'ny .png ho .rar) ary kitiho indroa izany, hisokatra miaraka amin'ny manager file anao (ark, roller file sns. ) ary vita, ny ambiny dia tsotra.
Fanamarihana farany sy fanazavana:
Azon'izy ireo atao ny maka tahaka ny sary miafina amin'ireo sakaizany tsy misy olana, hiasa ihany koa izy amin'ny Linux, Windows na Mac.
Indraindray ity fikafika ity dia tsy mandeha amin'ny sary, nitranga tamiko fa indraindray manafina rakitra ao anaty sary aho ary rehefa ovako ny extension extension ho .RAR ary sokafako dia mampiseho ahy fotsy fotsiny ny zava-drehetra. Raha sendra anao izany dia ovao ny sary 'tsy manan-tsiny' ho an'ny iray hafa mandra-pahatantereny anao.
Tsy dia ilaina loatra ny mametraka teny miafina amin'ny rakitra .RAR, saingy soso-kevitra kokoa izany satria ambaratonga fanampiny amin'ny fiarovana izay ekena tsara
Tsy voatery miaraka amin'ny sary PNG izy, fa mitovy amin'ny JPG.
Manantena aho fa nahaliana anao izany, satria misy ny rindranasa izay afaka manampy antsika hahatratra an'io, izany hoe tsy tokony hampiasa ilay baiko isika: SilentEye: afeno ao anaty rakitra hafa ny rakitra iray
Na izany aza, aleoko manokana mampiasa ilay baiko nasehoko anao etsy ambony, andao lazaina fa ny fametrahana rindrambaiko (miaraka amin'ny fiankinan-doha aminy) hahatratrarana zavatra azoko atao amin'ny baiko tsotra (saka) dia tsy heveriko fa tena ilaina izany.
Na izany na tsy izany, tsy misy zavatra betsaka tokony ampiana intsony, misy fisalasalana na fanontaniana ampahafantaro ahy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana ny fomba hanafenana rakitra amin'ny Linux (mihoatra ny fampiasana ny vanim-potoana amin'ny anarana)
Tena tsara 🙂
Misy fomba hanaovana izany amin'ny video? 🙂
Miaraka amin'ny horonan-tsary mbola tsy nandramako, ilaina ny manandrana fa ... Mihevitra aho fa tsy mandaitra tsotra izao 🙁
Ampiasao amin'ny tanjona tsara na ratsy? - Hehehe
Miresaka momba ny Ark, hijerena rehefa "manavao" na manolo azy mivantana izy ireo.
Lahatsoratra tsara, fa ny rar dia endrika fananana, maninona izy ireo no tsy manome sosokevitra maimaimpoana toy ny 7z izay lazain'izy ireo fa tsara kokoa noho ny rar?
Soso-kevitra tsara. Manatevin-daharana aho, eny, amin'izay nambaran'i lawliet, noho izy endrika 7z malalaka sy lehibe.
Ny 7z no endrika faneriterena tsara indrindra nandramako. Hahomby ve izany teknika izany amin'ny tarballs voahidy anaty GZip na BZip2?
Ny sary izay anananao ao aoriana ao amin'ny terminal anao dia maharary ny maso.
mahaliana ity, toy ny steghide.
Atsaharo ny manafina pr0n ... xD
Bandy mankaleo dia hoy izy:
Tsara, andramako izany.
Valio ny bandy mankaleo
Mihorohoro i Kernel! dia hoy izy:
Tena tsara! fa amin'ny archlinux tsy misy rar (raha misy fa tsy te hametraka azy avy any yaourt aho) azo atao ve amin'ny zip? Misaotra, lahatsoratra tsara be io.
Valio ny horohoro Kernel!
araka ny voalaza ao amin'ny lahatsoratra ...
(na fisie compresses fotsiny, tar.gz sns).
Miala tsiny, nisy zavatra nanelingelina ny saiko tamin'io ampahany tamin'ny famakiana io ary nandingako azy; Misaotra anao nilaza tamiko.
: Na tena mahaliana, misaotra amin'ny fika 😉
Buahhh tendrony mahafinaritra, tsotra sy azo ampiharina hanafenana zavatra misy sary "tsy manan-tsiny" lol.
Nano, miaraka amin'izany ... sarotra ny manafina sary vetaveta, satria ... alao sary an-tsaina ny folder misy ... 0 GB porn1, ampianao amin'ny sary miaraka amin'ny saka ... ary alao sary an-tsaina hoe inona ilay «sary» mandanjalanja, ho tsapan'ny olon-kafa rogue Misy zavatra hafahafa, ankehitriny, raha manafina sary, antontan-taratasy na zavatra kely, nefa miaraka amin'izay dia sarobidy tokoa, tsara izany.
Soso-kevitra feno fahendrena, ary mahasoa hanafenana fampahalalana saro-pady na hoe tsy te ho eo akaikin'ireo izay afaka mitsikilo amin'ny solosaina isika, tsy misy isalasalana fa ny sary dia mety 10Mb na maromaro kokoa ary rakitra lehibe kokoa mihoatra ny 20 Mb amin'ny sary iray dia mety mampiahiahy, fa angamba amin'ny horonan-tsary dia azo atao, ho hitantsika ny maha-azo atao azy. Amin'izao fotoana izao dia tena ilaina io.
KZKG tsara indrindra ^ Gaara, misaotra tamin'ny tendrony.
Misaotra betsaka KZKG ^ Gaara tamin'ity lahatsoratra ity, mitady fanazavana raha azo atao amin'ny horonan-tsary izany, hitako amin'ny wikipedia fa ny fampiasana an'io teknika io dia antsoina hoe steganography ary efa 400 taona talohan'i Kristy no nampiasaina, hoy ny USA ankehitriny , ny FBI sy ny hafatra steganografika avy amin'i Bin Laden dia hitan'ny CIA, izy ireo koa dia nampiasaina tamin'ny Ady Lehibe Faharoa. Toa be mpampiasa na amin'ny tanjona tsara izany na manimba. Ny rakitra audio, horonan-tsary, sary, protokolan'ny fifandraisana TCP, sns. Dia azo ampiasaina ho mpitatitra (izany hoe ny kaontenera). Tena liana manokana amin'ny zavatra tsotra toa an'i KZKG ^ Gaara aho nefa tsy mametraka fonosana. Ankehitriny dia hosokafantsika ny habetsaky ny sary mivezivezy ato amin'ity bilaogy ity hahitana raha manafina zavatra xDD izy.
Fampahalalana tsara inona. Tena ratsy aho fa mahazo an'io lesoka io amin'ny rakitra rehetra ezahiko ampiana: »Nisy lesoka teo am-panaovana rakitra tao amin'ny arisiva.
Misy olona hahafantatra ny antony hitrangan'izany amiko?
Tena tsara !! Tena fandraisana anjara lehibe….
Ireo teknika ireo dia antsoina hoe «Steganography», ary raha liana amin'ilay lohahevitra ianao, dia atoroko ny bilaogy neobits.org izay misy info, teknika ary fanazaran-tena marobe aza. Tsy misy ifandraisany amin'ilay tranokala aho, saingy amporisihiko izy io. Ary raha tena tian'izy ireo izany dia ho voatarika.
Ny nataonao tao dia concatenate (saka) roa rakitra ary tahirizo amin'ny valiny vaovao ny valiny. Izy io dia iray amin'ireo endrika steganography fototra indrindra.
Safidy iray hafa izay azo ampiasaina hanafenana amin'ny teny miafina ny fampiasana "aescrypt", zavatra mitovy amin'ny folderlock na mitovy aminy.
Manantena aho fa ilaina izany, arahaba
Tena tsara! Afaka nanao izany tamin'ny 7zip aho!
Ity raha sanatria misy liana (hampiasa ny ohatra avy amin'ilay lahatsoratra aho):
7z mankany miafina 7z tsiambaratelo -p
Napetrak'izy ireo ny teny miafina ary avy eo: saka ChristmasTux2008.png miafina.7z> foto_lista.png
Misaotra hatrany, hampiasako tsara!
Tsy misy dikany ny atin'ny lahatsoratra, raha tsy hiteny afa-tsy izay. Ny tena zava-dehibe dia ny fahalalana hoe iza ilay zazavavy xD
Ankoatr'izay, aleoko ny fomba "nentim-paharazana" amin'ny fanovana ny anaran'ny fisie sy ny fanitarana mba hahatonga azy ireo tsy hisy ilana azy ho an'ny liana, hany ka ilay rakitra "threesome.jpg" dia "algebra lists.odt linear".
Fa ireo mahalala kely, amin'ny fampiasana ny baiko "file" dia fantaro fa jpg io fa tsy odt. Ary ireo izay mahalala kely kokoa, mazàna mamaky ireo fisie miaraka amina tonian-dahatsoratra hexadecimal ary ao amin'izy ireo no ahitanao fa ny jpg dia manomboka amin'ny "JPEG".
Tena tsara, manaraka an'io otrikaina io ihany dia afaka maneho hevitra amin'ny cryptkeeper ianao mba hanafina ny lahatahiry.
Eto i elav dia nanao lahatsoratra cryptkeeper
Izaho dia nanao an'io fotsiny tamin'ny Windows niaraka tamina programa, nahafaly ahy ny nahita azy tao amin'ny Linux 😀 Ary raha te hahalala ianao: tsia, tsy afaka mamonjy horonan-tsary amin'ny sary izahay 😛 Tsy maintsy hanafina ny pr0n tsara kokoa ianao.
Raha afaka mamonjy horonantsary 2 amin'ny sary aho, ny lanjan'ny »sary» dia 40mb, raha misy olona mino fa miahiahy izy ireo. 🙂
Nanandrana nitahiry mp4 aho ary nilaza tamiko i mplayer fa tsy afaka milalao azy io: <Tsy rariny ...
Henry dia hoy izy:
lahatsoratra tena tsara hiarovana vaovao 😀
Valiny tamin'i Henry
Tiako kokoa ny fomba cryptkeeper mba hanana zavatra manokana 🙂
Tena tsara, ary raha vantany vao nataoko izany rehetra izany tamin'ny Linux. Ahoana ny fomba isehoana azy amin'ny Windows, azoko atao ve ny manokatra azy amin'ny WinRAR?
juanmnz117 dia hoy izy:
Eny, arak'ireo fanamarihana farany dia milaza fa mandeha izy, ary satria ny rar no tena endrika ampiasain'ny winrar asaai, dia tsy tokony hisy olana
Mamaly an'i juanmnz117
Darkvid dia hoy izy:
Tena tsara, na dia tsy maintsy raisina aza ny lanjan'ny rakitra vaovao, ny sary kely izay mitaky habaka betsaka dia mety hampiahiahy ihany 😉
Mamaly an'i Darkvid
pirahalahiana dia hoy izy:
Teknika tena tsara. Mbola tsy nahita an'io aho. Misaotra amin'ny fampidirana.
Valio amin'ny firahalahiana
Tena tsara na dia amin'ny fampiharana aza dia mety tsy dia azo antoka loatra izy io, noho ny haben'ny rakitra na famafana tsy nahy ny fisie.
Tsy fantatro fa afaka manao an'io ny baiko "saka". Ny habetsaky ny baiko tsy mahazatra izay tsy maintsy adino any ary manao zavatra tsy azo eritreretina, na manao asa amin'ny fomba mora na haingana kokoa noho ny fomba hafa mahazatra antsika.
Jose Perez dia hoy izy:
Tsy maintsy nanao zavatra tsy mety aho, saingy tsy mety amiko ilay fikafika.
Notsapaiko tamin'ny sary jpg samihafa sy fisie samihafa hanafenana azy, ary tsy nahomby aho.
Reraka noho ny tsy fahombiazana be loatra aho, dia nanantona ireo sary omenao amin'ity lahatsoratra ity, ary miaraka amin'ny valiny mahakivy ihany, afa-tsy ny fisie amin'ilay sary_lista.png rakitrao, izay nahafahako nahazo ny sarin'ilay zazavavy.
Ny hany zavatra afa-mandositra ahy dia ny fanombanana ny rar, saingy azoko tsara fa tsy tokony hisy fiantraikany aminao izany.
Noho ny fahombiazana voafetra dia tsy sahy nanao ilay 7z aho. zava-bitany
Valiny tamin'i José Pérez
Hi hizaha izany
Mitendry ny baiko ve ianao? Raha izany dia ampitampitao amiko ny rohy izay tianao afenina sy ny sary tianao hanafenana azy hizaha toetra ahy ary hilaza aminao.
Raha ny marina raha .rar na .7z na zavatra toa izany tsy dia maninona 🙂
tena tsara, tsy fantatro fa mora be izany ary avy amin'ny bash mihitsy!
Wilson dia hoy izy:
Tiako ity bilaogy ity, tena azo sary, mianatra be dia be amin'ny famakiana azy ireo aho.
Tiako ny fandalinana ataon'izy ireo amin'ny vaovao, tsara ihany koa ny fandinihana ara-teknika, tsara lavitra noho ny bilaogy Free Software hafa hitako io.
Misaotra anao noho ny efa nisy sy ny toetranao hatrizay.
Tohizo ny asa tsara, mivoatra hatrany, ataovy lafatra foana ny tenanao.
Enga anie ny bilaogy sy tranokalam-baovao hafa toa anao,
Fifamihinana! = D
Valiny tamin'i Wilson
FR @ NK dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara…
Valio amin'i FR @ NK
ny fomba fanaovana azy amin'ny openuse 13.1
ElementalOSX: Lohahevitra ho an'ny Dekorator, QtCurve ary Colour KDE
Ardor 3, ny DAW maimaimpoana tsara hatreto, azo alaina